Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Ịchekwa ụlọ kwa ụbọchị na họtel emechaala nwụọ?
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Nyocha ụlọ ọrụ anyị hụla na-egosi na mgbanwe mgbanwe ụlọ nwere ike ibute nchekwa 100- ruo 200 nke ga-emetụta arụmọrụ ụlọ oriri na nkwari akụ. Agbanyeghị, ụkọ ọrụ na ọzụzụ ndị ọrụ ụlọ chọrọ ugbu a ka ha na -asachaghị ụlọ maka oge a niile na -egbochi ọnụego nrụpụta ka ọ dị elu.
A manyere ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ ịkụ ọrụ n'oge ọrịa.
Nkwụsịtụ idebe ụlọ kwa ụbọchị bụ otu nhọrọ maka ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ.
Hilton bụ otu n'ime ndị izizi jiri ụkpụrụ kwụ ọtọ na -elekọta ụlọ.
Hotels gbara mgba ka ọ kwụsie ike na 2020: naanị imebi ka e weere dị ka nnukwu ihe. Iji mee nke ahụ, a manyere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ - ụ - ọ bụ ezie na ọ dị mkpa - imebi ọrụ ebe ha nwere ike.
Otu n'ime ihe kacha dị ịtụnanya bụ na ọ ka bụ nkwụsị nke idebe ụlọ kwa ụbọchị n'ọtụtụ ụlọ oriri. Ọrụ a, ozugbo ndị ọbịa nabatara ya, ghọrọ ihe ana-ebubata ma anaghị enye ya ruo ọtụtụ ụbọchị ka ịbanye.
Hilton bụ otu n'ime ndị mbụ wepụtara mkpebi siri ike maka idobe ụlọ, mana ọtụtụ ụdị na -eso, ma na -ekwupụta ya na ọhaneze ma ọ bụ na -agwa ndị ahịa mgbe ha banyere. -19, mana ya onwe ya, e weere dị ka onye na -echekwa ego, na -amachi awa ndị ọrụ ụlọ.
Somefọdụ na-ekwu na ịkwaga maka arịrịọ maka idobe ụlọ bụ otu n'ime ihe nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ na ihe ndị na-adịghị mma, dị ka otu ụgbọ elu si arụ ọrụ, ebe enwere ụgwọ maka ihe dị iche iche na-abụbu ihe inye onyinye.
Mgbanwe ahụ ọ na -enwe mmetụta n'ezie na akara ala - ịchekwa ego na ịkwalite uru? Ọ ga -aga n'ihu ebe obibi na -ebili? Kedu ihe ndị ọbịa na -eche?
Dị ka ọtụtụ akụkụ nke ụlọ ọrụ nkwari akụ, okwu a dị mgbagwoju anya karịa ka mmadụ nwere ike iche na mbụ.